Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 14)
NavBar Apps waxay shaqsiyeeyaan baarkaaga wareejinta ee Android adigoon xidid noqon
Barnaamijyada NavBar waxaad ku habeyn kartaa baarka marinka oo leh midabka barnaamijka hadda jira, midab go'an ama beddeli kara asalka sawir shaqsiyeed.
Sida loogu xakameeyo qalabkaaga Android kumbuyuutarka PC-ga iyo jiirka
Barnaamijkan oo loo yaqaan 'DeskDock' waxaad ku xakameyn kartaa taleefankaaga Android adoo keenaya tilmaamaha jiirka ee shaashadda isla markaana xitaa awood u leh inaad ku wareejiso faylasha
BlackBerry Hub + oo hadda loo heli karo dhammaan Android 5.0 iyo qalab ka sareeya
BlackBerry Hub + waa nooc ka kooban 7 barnaamij oo aad ku qaban karto dhammaan noocyada hawlaha taasna waxay kaa qaadan doontaa qayb ka mid ah barnaamijyada BlackBerry.
3 barnaamij ee kamaradaha ugu fiican sanadka 2016
3 barnaamijyada kamaradaha cusub ee 2016 ee diirada saaraya qaabka HDR, miirayaasha iyo isdhexgalka sifiican loo ilaaliyay oo ka tagi kara kuwa caanka ah dhinaca.
Android Nougat ROM-yada ayaa hadda loo heli karaa jiilka koowaad iyo saddexaad ee Moto G
Haddii aad leedahay Moto G jiilka koowaad iyo saddexaad, waxaad kala soo bixi kartaa qaar ka mid ah ROM-yada Nougat ee ku jira tillaabooyinkeedii ugu horreeyay
Instagra waxay tirtiraysaa mid kamid ah astaamaheeda ugu quruxda badan
Instagram ayaa ka saartey muuqaalka Khariidadaha Sawirka barnaamijka mobilada isticmaalayaasha qaarkood. Dhawaan qof walba.
Ku hel dhammaan muusikada aad rabto bilaash codsigan xasaasiga ah ee loogu talagalay Android ee ay abuurtay Huawei
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo rakibo waxa aniga ii ah arjiga ugu fiican ee laga soo dejisto muusikada bilaashka ah ee ku jira bartaada 'Android terminal'.
Sida loo arko ogeysiisyada Facebook iyo farriimaha ka soo socda widget dusha desktop-ka
Iyada oo la adeegsanayo wijito la daabacay Google Play Store, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto ogeysiisyada / farriimaha Facebook dusha desktop-ka.
Drupe, oo ah barnaamijka taleefanka ee bilaashka ah ee 'Android', ayaa ku daraya awooda duubista wicitaanka
Drupe waxaa lagu cusbooneysiiyay muuqaal aad u qabow: duubista wicitaanka codka. Barnaamijkani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican maaraynta wicitaanka.
Cusbooneysiinta TickTick oo leh tilmaamayaasha horumarka, liisaska xariifka ah iyo aragtida shabakadda
TickTick waa maareeye liistada wax-u-qabashada oo hela warar badan oo aad u xiiso badan oo ku saabsan nooca cusub ee dalabka.
Barnaamijka ugu wanaagsan ee Android adduunka waxaa lagu magacaabaa FooView - Float Viewer waana bilaash
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa in isticmaaleyaal badan ay tahay codsiga ugu fiican Android adduunka. In kabadan codsi, sanduuq dhan oo qalab ah ama mindi ciidanka Switzerland.
U dhex mar sawirrada aaladaha Warbixinta Tirada Yar
Maanta waxaan ku tusayaa sida loogu wareejiyo sawirada inta udhaxeysa aaladaha sida Warbixinta Tirada Yar ama CSI iyada oo aan loo baahneyn fiilo kaliya iyadoo la furayo feyl.
[APK] Sida loo rakibo barnaamijka cusub ee 'Nexus Launcher', ee loo cusbooneysiiyey Google Now Launcher waxkastoo Android 6.0 ah
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo rakibo Nexus Launcher, cusboonaysiinta Google Now Launcher ee loogu talagalay Android 7.0 Nougat meel kasta oo terminal Android 6.0 Marshmallow ah.
Moto waxay uqaadaa fayl baareheeda dukaanka Play wixii cusbooneysiin ah
Dukaanka Play-ka waxaad horayba uga heli kartaa baaraha faylka mootooyinka Motorola 'lakabka u gaarka ah: Moto Files.
Instagram ayaa dhawaan u oggolaan doonta qanjaruufo-si loo dhejiyo sawirrada iyo fiidyowyada
Instagram ayaa cusbooneysiisay abka si loogu isticmaalo ficil-celinta-soo-dhaweynta fiidyowyada iyo sawirrada; ugu dhakhsaha badan ayaa sidoo kale ku jiri doona Android dhowaan.
Circle SideBar, barnaamijka bilaashka ah ee si fiican u buuxiya Launcher-kaaga Android
Maanta waxaan kuu keenay Circle SideBar kaas oo noqon kara kaamil u ah Launcher-kaaga Android.
Tijaabooyinka cusub ee Imtixaanka iyo Naqshadeynta Qalabka ee Geekbench 4
Haddii aad raadineyso inaad ku dhejiso taleefankaaga casriga ah imtixaanka si aad u aragto sida ay u shaqeyneyso qalabkiisa, hadda waxaad haysataa nooca cusub ee Geekbench 4 ee ku yaal Android.
Minima Player, oo ah muusigga muusigga cusub ee loogu talagalay Android oo leh naqshad qurux badan oo ballanqaad badan leh
Maanta waxaan u soo bandhigayaa ciyaaryahan muusig cusub oo loogu talagalay Android oo ku hoos jira magaca Minimal Player oo runtii u muuqda mid cajiib ah.
Sawirka ugu wanaagsan ee Android waxaa lagu magacaabaa PiKtures leh «K» waana bilaash
Maanta waxaan ku soo bandhigeynaa PiKtures "K", oo aniga ah kan ugu fiican sawir-gacmeedka loogu talagalay Android, barnaamij casri ah oo ka buuxa qaab iyo qaabab.
Sida loo tirtiro xiriirada nuqul ee ku saabsan Android
Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Google Contacts, nooca 1.5, waxaad awoodi doontaa inaad isku xirto xiriirada aad hayso nuqulada si aad uhesho ajandaha yar ee raran.
Qualcomm ayaa cadeysa sababta Nougat aysan u gaari doonin aaladaha qaar
Android 7.0 Nougat ma gaari doono aalado dhowr ah oo ay tahay inuu helo marka uusan xitaa labo sano jirsan; Shirkadda Qualcomm ayaa caddeysa waxa ka jira.
Google Crowdsource waa barnaamij caawimaad ka raadsanaya tarjumaadda iyo adeegyada kale adeegsadayaasha
Crowdsource waa barnaamij cusub oo ay Google rajeynayso inaad ka caawin doontid inay ansaxiso tarjumaadaha, tilmaamaha khariidadaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Suhide waa barnaamijka cusub ee loo yaqaan 'Chainfire app' oo ka qarinaya xaaladda xididka barnaamijyada
Waxaa jira barnaamijyo sida Android Pay ah oo haddii ay aqoonsadaan inaad xidid ku haysato mobilkaaga, aan kuu oggolaan doonin inaad isticmaasho. Suhide waa barnaamijka loo yaqaan 'Chainfire app' ee iska ilaaliya tan.
[APK] Xiriirrada Google waxaa loo cusbooneysiiyay illaa 1.5 iyadoo la cusbooneysiiyay naqshad, sumado iyo nuqullo
Xiriirada Google waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.5 iyadoo la adeegsanayo naqshad cusub, taaga lagu daray iyo awooda lagu maareeyo nuqullada.
Sida loo helo Android-kaaga si ay ugu xirmaan calaamadda ugu xooggan ee Wi-Fi
Barnaamijkan waxaad ku heli kartaa taleefankaaga casriga ah ee Android si uu ugu xirmo shabakadda Wi-Fi oo leh awoodda ugu sareysa si uusan u lumin xawaaraha isku xirka.
Sii xaalkaaga maqaarka midabada iyo astaamaha Naqshadeynta Maaddada Nadiifsan ee Android
Xaaladda waa barnaamij ku siinaya baraha xaaladda Android ee saafiga ah oo leh astaamo, ogeysiisyo iyo isku midab ah barnaamijka aad isticmaaleyso
Huawei-dhamaadka sare ayaa horay loogu sii rakibi doonaa barnaamijka Truecaller
Huawei wuxuu horay u sii dejin doonaa barnaamijka 'Truecaller app' si loola dagaallamo spam taleefanka noocyadiisa sare, laga bilaabo Honor 8, oo ah taleefankiisii ​​ugu dambeeyay ee la bilaabay
Hawlaha, Astrid's clone to-do list app, oo ah bedelka ugu fiican ee Todoist
Hawlaha waa barnaamij bilaash ah oo isku xira Astrid, mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee xusuus-qorista ah ee ka lumay Google Play Store.
Sida loo joojiyo wadaagista macluumaadka koontadaada WhatsApp Facebook
WhatsApp hadda macluumaadka ay ku leedahay koontadaada ayey kula wadaagtaa Facebook, sidaa darteed waxaan ku baraynaa inaad joojiso la wadaagidaada qaab aad u fudud.
Hadda waxaad ku ciyaari kartaa kelidii iyo tic-tac-toe raadinta google
Google wuxuu bilaabayaa laba ciyaar oo yar yar oo raadinta ah, adigoo garaacaya suulasha ama tiknoolajiyada, waxaad si dhakhso leh ugu ciyaari kartaa labadan kulan
YouTube wuxuu dib udayacayaa sharaxaadda fiidiyowga iyo ficilada marin u helka sifiican
YouTube, dhanka serverka, wuxuu cusbooneysiiyay iskuxirka badhamada inta badan la isticmaalo marka fiidiyow la ciyaarayo
Barnaamijkan waxaad ku dhaqaajin kartaa habka habeenka ee Android 7.0 Nougat
Nooca ugu dambeeya, Google ayaa tirtiray Habeenkii Habeenkii, laakiin barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad badbaadiso haddii aad haysatid Android 7.0 Nougat taleefankaaga.
Sida loo rogo Android-ka loo yaqaan 'Sony PSP' oo leh emulator-ka ugu fiican PSP ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loogu wareejiyo Android-kaaga Sony PSP si ay ugu awoodaan inay ku ciyaaraan ciyaaraha PSP qaab ISO qaab aad iyo aad u fudud.
Sida loogu daro khaanadda arjiyada ee galkaaga Android
Ma leedahay terminal-ka Android adiga oo aan lahayn khaanad codsi? Miyaad dooneysaa inaad ku darto khaanad cusub oo codsi Android ah terminal-kaaga adigoon u hurin Launcher-kaaga?
WhatsApp waxay xogtaada la wadaagi doontaa Facebook sida looga dhawaaqay boggeeda
WhatsApp ayaa cusbooneysiisay siyaasadeeda gaarka ah waxayna shaacisay inay bilaabi doonto la wadaagida xogtaada Facebook si albaabada loogu furo ganacsiyada maxaliga ah
HTC waxay xaqiijineysaa taariikhaha cusbooneysiinta Android Nougat
HTC waxay qorsheyneysaa inay cusbooneysiiso cusbooneysiinta Nougat rubuca ugu dambeeya sanadka ilaa seddex ka mid ah xarumaheeda: HTC 10, One M9 iyo One A9
Xiaomi Redmi Note 4 hadda waa rasmi oo leh shaashadda 5,5 ″, Helio X20 iyo batari 4.100 mAh ah
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Xiaomi Redmi Note 4 oo leh shaashad 5,5 ah, qalab Helio X20 ah iyo batari 4.100 mAh ah oo taleefan ah oo dhaafaya $ 135
Google wuxuu ku qariyaa bar hagitaan si heer sare ah loo habeyn karo oo ku jira Android Nougat
Baarka hagitaanku wuxuu noqon karaa mid si buuxda loo habeyn karo sida ugu dhakhsaha badan sida ku cad koodhka laga helay Android 7.0 Nougat.
WhatsApp wuxuu horeyba u oggol yahay dirista GIF-yada firfircoon, in kasta oo leh nuunisyo
Telegram waa mid aad u weyn oo loo diro GIF-yada, halka WhatsApp, xitaa lagu daro GIFs, ay aad uga hooseyso awoodda kii hore.
Kuwani waa qalabka Sony ee loo cusbooneysiin doono Android 7.0 Nougat
Sony ayaa hadda soo saartay liistada qalabka oo dhan oo loo cusbooneysiin doono Android 7.0 Nougat. Waxa aadan tilmaamin waa taariikhaha loogu talagalay.
Android 7.0 Nougat ayaa iman doona kuwan moodooyinka Sony Xperia Z iyo Xperia X
Sony ayaa ku dhawaaqday liiska noocyada Xperia Z iyo Xperia X ee lagu cusbooneysiin doono Android 7.0 Nougat, in kasta oo aysan bixin taariikh cayiman.
ap15 Launcher, minimalist, shaqeynaya oo ka duwan Launcher Android oo aad jeclaan doonto
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa wax yar oo shaqeynaya oo kala duwan oo bilaash ah oo 'Android Launcher' kaas oo gebi ahaanba beddeli doona qaabka terminal-kaaga Android.
Android 7.0 Nougat ayaa halkan loogu talagalay qalabka Nexus
Android 7.0 Nougat wuxuu bilaabaa inuu ku dego aaladaha Nexus la jaan qaada: Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Nexus Player, Pixel C iyo Android One
OnePlus wuxuu daabacaa dhismihii ugu horreeyay ee Android Marshmallow ee loo yaqaan 'OnePlus X'
OnePlus X waa heerka gelitaanka shirkaddan oo hadda daabacday qalabkii ugu horreeyay ee Adroid 6.0.1, inkasta oo bulshada lafteeda
In ka yar 7 maalmood waxaan haysan karnaa Android 7.0 Nougat
Xog daadis ah ayaa muujisay taariikhda la sii deyn doono Android 7.0 Nougat, oo loo dhigay Isniinta, Ogosto 22 si loo helo nuqulkan cusub.
Saddexda nooc ee daaqadaha badan ee Android 7.0 Nougat
Android 7.0 Nougat si dhakhso leh ayuu noola joogi doonaa oo qaar ka mid ah awooddeeda waxaa ka mid ah saddexda nooc ee daaqadaha badan ee ay soo bandhigi doonto.
Codka Cad wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto oo aad wadaagto dhawaqa jawiga aad jeceshahay
White Noise waa barnaamij kuu ogolaanaya inaad duubto oo aad wadaagto dhawaaqyada jawiga si aad ugula wadaagto shabakadaha bulshada iyo inbadan
2.000 tijaabiyayaal Kuuriya si ay ugu tijaabiyaan Android 7.0 Nougat LG G5
LG wuxuu u oggolaan doonaa 2.000 tijaabiyeyaal inay ku tijaabiyaan Android 7.0 Nougat gudaha Kuuriya ka hor inta aan si rasmi ah loogu sii deyn LG G5.
100 Gb oo ah kaydinta daruuraha bilaashka ah ee keydintaada Android
100 Gb oo ah kaydinta daruuraha bilaashka ah si aad nuqulo nuqul ah uga samaysato boosteejooyinkaaga 'Android' iyo had iyo jeer iyaga aamin.
FineScanner waa barnaamij kale oo lagu baarayo dukumiintiyada tayada sare leh
FineScanner wuxuu ka yimid macruufka si uu u muujiyo inay jiraan wax kale oo ka duwan kan Microsoft ee caanka ah CamScanner ama Office Lens.
10 ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aad ku isticmaali karto Chromecast-kaaga
Chromecast waa dongle oo u oggolaanaya qulqulka waxyaabo badan oo warbaahin ah iyada oo loo marayo shaashadda telefishanka. Kuwani 10 apps kor u isticmaalka.
Qalabka ugu fiican ee Launcher-kaaga Android waxaa loo yaqaan 'CM Swipe'. CAJIIB !!
Maanta waxaan soo bandhigayaa waxa shaki la’aan ah dhammaystirka ugu fiican ee barnaamijkaaga Launcher-ka android, oo ah barnaamij u ekaysiinta Koontaroolka PIE ee wixii Android ah.
5 barnaamij oo loogu talagalay shaashadda qufulka ee ah inaad isku daydo Android-kaaga
5-kan barnaamij waxay kaga duwan yihiin inta kale iyagoo leh sifooyin gaar ah iyo dhamaan iyagoo leh tayo aad u wanaagsan waxa u ah dalabka xanibaada
3-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee qalabka Android
3-kan barnaamij waxay kuu ogolaanayaan inaad haysato qalab aad u tiro badan oo ay dareemayaasha aaladdaada moobaylka u adeegsadaan inay ku qabtaan dhammaan noocyada hawlaha.
Kuwani 5 barnaamijyadooda ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso batteriga oo aad ka dhigto mid si fiican u shaqeynaya inta lagu jiro maalinta si aad u ciyaari karto Pokémon GO.
4 barnaamijyo kuwaas oo si qumman u qiimeynaya mid kasta oo iyaga ka mid ah in la duubo barnaamijyadooda oo markaa abuuro dhowr tusaale oo mid ah. Waa ansax in la helo laba xisaab ciyaar, WhatsApp ...
10 barnaamij oo leh koronto gaar ah taasna waxay noqon kartaa lama huraan
Barnaamijyada lama huraanka u noqon kara laga bilaabo marka aad rakibto oo aad ogaato inaad ugu baahan tahay khariidadaha qad la'aanta.
5-ta barnaamij ee ugu fiican ee aad ku heli karto caafimaad wanaagsan
Haddii aad rabto inaad hagaajiso caafimaadkaaga oo aad dareento fiicnaan, barnaamijyadan 5-ta ah waxay ku soo hagaagayaan inay dhammaystiraan qaar ka mid ah maaddooyinka si ay u horumariyaan.
4 barnaamij kumbuyuutar oo aad u badan tahay inaadan aqoon
4 barnaamij kumbuyuutar oo tayo sare leh oo ka baxsan kuwa SwiftKey, Keyboard Android, Swiype ama Minuum oo ay u badan tahay inaadan aqoon.
4-ta kumbuyuutar ee ugu wanaagsan ee tilmaanta Android
4 barnaamijyada kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Android keyboard' oo si fiican ula shaqeeya tilmaam iyo inaadan ka baaqan karin tayada iyo xulashooyinka ay leeyihiin awgood.
5 xirmooyin icon oo casri ah, bilaash ah oo gaar ah oo aadan seegi karin
5 baakado icon gaar ah oo casri ah oo aadan ka maarmi karin si aad u siiso miiskaaga casriga casriga isbeddel weyn oo bilaash ah.
5-ta barnaamij ee ugufiican ee lagu akhriyi karo buugaagta elektarooniga ah ee Android
In Android waxaan leenahay 5 codsi oo ku imaan kara anfacaya akhriska buugaagta dhijitaalka ah ama buugaagta elektarooniga ah qalabkeena.
YouTube Music Hack u Android Marshmallow oo aan xidid
Maanta waxaan ku siineynaa xalka dhibaatooyinka isku xirnaanta YouTube Music iyo tan YouTube Music Hack oo ansax ah dal kasta iyo xitaa Android Marshmallow.
5 barnaamij oo muhiim u ah dabeecadaha jecel
Laga soo bilaabo Android waxaan fursad u leenahay inaan ku soo dhawaano barnaamijyo taxane ah oo noo oggolaanaya inaan si fiican u fahamno deegaanka iyo dabeecadda gobolkeenna
[Post Cusboonaysi 2-8-2016] Sida loo rakibo YouTube Music oo loogu raaxeysto wadamada aysan soo dejintoodu rasmi ahayn weli
Maanta waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo soo dejiyo loona rakibo YouTube Music loona sameeyo mid ka shaqeysa waddan kasta xitaa haddii aan si rasmi ah loo heli karin.
[APK] YouTube Gaming 1.5 wuxuu ku darayaa sheekaysiga fiidiyowga, jaheynta muuqaalka, taariikhda daawashada iyo waxyaabo kaloo badan
Ciyaaraha YouTube-ka ayaa loo cusbooneysiiyey nooca 1.5 oo leh taxane aad u fara badan oo astaamo cusub sida muuqaalka muuqaalka ah, wada sheekaysiga shaashadda oo dhammaystiran iyo inbadan.
Opera Mini ee loogu talagalay Android wuxuu ku darayaa muujinta fiidiyowga
Opera Mini waxay ku dartay awood ay ku soo degsan karto fiidiyowyada aad ka ciyaareyso bog furaha shabakada ee Android oo u ololeynaya yareynta isticmaalka xogta
Runkeeper 7.0 ku dar kooxo si aad ugu xalliso asxaabtaada inay aadaan orod
Runkeeper ayaa cusbooneysiiyay barnaamijka sifo heer sare ah si loogu dhiirrigeliyo abuuritaanka kooxo inay ku boodaan qof.
Sida loogu rogo Android-gaaga mikirifoon tayo sare leh
Maanta waxaan ku tusinaynaa talaabo talaabo ah sida aad ugu rogi karto Android-kaaga makarafoon tayo sare leh oo wireless ah oo aanad qarash gareeyn Euro.
CTRL-F waxay kaa caawineysaa inaad ku raadiso dukumiintiyada qoraalka dhabta ah kamaradda taleefankaaga
CTRL-F waa barnaamij Android ah oo adeegsada kaamirada iyo aqoonsiga qoraalka si loo raadiyo dukumiintiyada dhabta ah
OxygenOS 3.2.2 waxay la timid horumarin lagu sameeyay Doze iyo waxyaabo kaloo badan oo loogu talagalay OnePlus 3
OnePlus 3 wuxuu horeyba uhelayaa cusbooneysiinta cusbooneysiinta OxygenOS 3.2.2 ee keenta horumarin muuqata oo lagu sameeyo quudinta iyo dhowr kale
Sida loo daawado filimada bilaashka ah si sharci ah
Maanta waxaan ku tusineynaa xalka ugu dambeeya si aad si sharci ah uga daawato filimada bilaashka ah terminaalkaaga Android.
Sida looga saaro ogeysiiska joogtada ah ee Prisma ee soo baxa marka la isticmaalayo abka
Markaad isticmaaleyso Prisma, waxaad arki kartaa ogeysiis joogto ah oo madhan oo tilmaamaya inay ka shaqeyneyso sawir. Waxaan kaa caawinaynaa inaad ka saarto.
Khariidadaha Google waxay helayaan naqshad cad oo "meelaha xiisaha leh"
Khariidadaha Google waxay soo bandhigaysaa isbeddel naqshadeyn ah si khariidadaha loo caddeeyo waxayna hadda iftiimin doontaa aagagga loo yaqaan "meelaha xiisaha leh"
Sida looga saaro astaanta astaamaha sawirrada aad ku qaadatid Prisma
Prisma waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu yaabka badan ee sanadka iyo miirayaasha farshaxankeeda ayaa maareynaya inay ku soo duulaan shabakadaha kale ee bulshada ee loogu talagalay sawirrada.
Motion waa barnaamij aad ku duubi karto fiidiyowyo joogsi-dhaqdhaqaaq xiiso leh
Dhaqdhaqaaqa waa barnaamij ka dhigaya mid fudud in la abuuro fiidiyowyada dhaqdhaqaaqa ee joogsiga, farsamada animation-ka ee loo adeegsado filimo badan oo dhoobo ah.
Prisma, barnaamijka casriga ah ee miirayaasha farshaxanka, ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store
Prisma hadda si rasmi ah ayaa looga heli karaa Google Play Store. App-ka ugu fiican ee filtarka shaandheeya qaybtiisa
Khariidadaha Google ayaa geeya nooc cusub oo wata Wi-Fi oo kaliya iyo ogeysiisyada gaadiidka dadweynaha
Khariidadaha Google ayaa lagu cusboonaysiiyay laba astaamood oo cusub: ogeysiisyada dib-u-dhigga gaadiidka dadweynaha iyo habka kaliya ee Wi-Fi ee khariidadaha qadla'aanta.
Tinder wuxuu bilaabayaa Tinder Social, waa hab fiican oo lagu sameeyo isku xirnaanta
Tinder waxay soo bandhigtay Tinder Social si ay u dhiirigeliso abuurista kooxo asxaab ah oo ay la kulmaan kooxo kale sidaasna ay ku kulmaan si ay uga dhigaan habeen xiiso badan
Koush wuxuu bilaabay Inkwire, barnaamij cusub oo lagula wadaago shaashadda moobaylkaaga mid kale
Fogaanta taleefanka casriga ah ee laga helo mid kale, Koush wuxuu ku bilaabay Inkwire qaab beta ah si aad uga heli karto Play Store
Doremi 2, oo ah muusigga muusigga ee Android ee muusikada ku soo dejiya bilaash
Maanta waxaan soo bandhigeynaa barnaamij ku yaal Google Play Store oo naga caawin doona inaan kala soo baxno muusikada bilaashka ah ee Android.
Sida loo soo dejiyo loona rakibo Apptoide, dukaanka ugu fiican ee wax lagu kaydiyo dukaanka Google Play Store
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Apptoide si badbaado leh Android-keena si aan ugu raaxeysto barnaamijyadan aanan ka soo dejisan karin Google Play
4 barnaamijyo note-qaadasho ah oo lagu beddelan karo Evernote
4 barnaamij oo leh astaamo u gaar ah iyo kala duwanaansho laakiin taasi ma laha xaddidaad qalab si ay ugu waafajiso qoraaladaada oo dhan iyaga
Periscope wuxuu helaa isjiidka gaagaaban, awooda lagu daawan karo barnaamijyada Periscope ee tweets iyo waxyaabo kale oo badan
Periscope wuxuu hadda oggol yahay ka mid ahaanshaha 'Periscopes' tweets-ka, awood u lahaanshaha daawashada gawaarida gaagaaban ee warbaahinta, iyo inbadan.
Isku darka ugu fiican ee shaashadda qufulka iyo Launcher ayaa laguugu siinayaa adiga iyo Next iyo Fallaarta
Maanta waxaan kugula talineyaa waxa aniga ii ah isku dhafka ugu fiican ee shaashadda qufulka oo lagu daray Launcher-ka korantadayada 'Android'.
Allo iyo Duo waxaa lagu dari karaa Android 7.0 Nougat iyadoo qayb ka ah nidaamka
Xan ayaa soo socota oo soo jeedinaysa suurtagalnimada in Allo iyo Duo labadaba lagu dari karo Android 7.0 Nougat markii la sii daayo.
[APK] WhatsApp hadda waxaa ku jira farriin cod cusub iyo sanduuqa boostada ee dib-u-habeynta ee beta
Waad soo dejisan kartaa APK ama ka qayb geli kartaa beta si aad u hesho labada war ee WhatsApp: farriinta codka iyo soo wicitaanka.
Codsiyada ugufiican ee lagu daawado filimada kujira Android-kaaga
Isku-darka barnaamijyada ugu fiican Android iyo boggaga si aad ugu daawato filimaan iyo taxane taleefankaaga ama kaniiniga ah bilaash iyo bilaashba fayrasyada
Sawirrada Google waxaa ku jira 1.24 qalab hagaajin wax soo saar leh iyo in ka badan
Haddii aad u isticmaashay inaad sawirro ku gooyso Sawirada Google, nooca 1.24 wuxuu ku fiicnaanayaa qalabkan waxtarka badan xaaladaha badan.
Arts & Dhaqanku waa barnaamijka cusub ee Google ee adduunka farshaxanka ugu soo dhowaanaya taleefankaaga casriga ah
Haddii aad raadineyso barnaamij qaas u ah adduunka farshaxanka iyo dhaqanka, Arts & Dhaqanka ee Google waa barnaamij aad u qaas ah oo ay tahay inaadan ka maqnaan.
Jadwalka Dials, saacad yar oo ku saleysan dhacdooyinka jadwalka oo leh taabasho muuqaal ah macruufka
Haddii aad raadineyso saacad aad u yar iyo barnaamijka jadwalka, Dials Calendar waa midka ugu fiican iyada oo la siinayo khibrad isticmaale oo gaar ah.
Sida loo abuuro gameplay kuu gaar ah oo ka socda Android-kaaga, xitaa duub wajigaaga !!
Maanta waxaan ku tusayaa adiga talaabo talaabo ah sida loo abuuro gameplay kaaga u gaarka ah Android iyo isticmaalka kaliya ee kaliya terminaalka Android.
Android Nougat ma bilaabi doono mobiladaada hadii barnaamijkeedu xumaado
Qiyaasta amniga ee loo yaqaan 'Android Nougat' oo bilawga ah ayaa ka baari doonta barnaamijka khaldan ee taleefanka, sidaa darteed ma bilaabi karto.
[La cusbooneysiiyay] Prisma ayaa ku degtay Android ka dib markii ay ku guuleysatay shaandhooyinkeeda farshaxanka ee iOS
Prisma waa barnaamijka isbeddelka ah ee xilligan lagu adeegsanayo miirayaasha farshaxanka ah sawirrada aad qaadatid xagaagan oo adeegsanaya algorithm.
ZTE ZMax pro wuxuu hada rasmiya layahay shaashadda 6 ″ FHD iyo batari 3.400 mAh ah $ 99
ZTE ayaa hada soo bandhigtay taleefan casri ah oo mudane ah oo leh astaamo qalab aad u wanaagsan taasna waxay ku imaaneysaa qiime aad u jaban oo ah $ 99
Horeba waad ku ogaan kartaa Android 7.0 Nougat halka laga rakibo abka
Falanqeeyaha Horudhaca 5 ee Android 7.0 Nougat waxaad horeyba u ogaan kartaa asalka rakibaadda barnaamijka si aad u ogaato inuu ka yimid Dukaanka Play ama APK
Android 7.0 Falanqeynta Nougat Final Developer Hada Waa La Heli Karaa; hordhaca u ah bilaabitaankeeda
Kani waa nooca ugu dambeeya ee soosaarayaasha Android 7.0 Nougat oo aan si rasmi ah u arki karno dhammaadka bisha soo socota.
Waa la sifeeyey in Xiaomi Redmi Note 4 uu yeelan doono qalab Helio X20 ah iyo batari 4.100 mAh ah
Thanks to sanduuqa 'Redmi Note 4' waxaan garan karnaa qaar ka mid ah qeexitaanka cusub ee Xiaomi Redmi Note 4 oo la soo bandhigi doono July 27
Ku abuur GIF-yada firfircoon ilbiriqsiyo GIF Camera ah
Haddii aad raadineyso barnaamij si aad ugu abuurto GIF-yada firfircoon ilbidhiqsiyo gudahood, GIF Camera waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aad heli karto.
[APK] Waxaan ku baraynaa sida loo cusbooneysiiyo Hangouts si aad ugu raaxeysato waxqabadka cusub ee farriimaha fiidiyowga ka hor qof kasta
Tani waa sida ay u shaqeeyaan Hangouts 11 farriimaha fiidiyowga, waxaan ku baraynaa sida loo rakibo ama loo cusbooneysiiyo Hangouts xitaa ka hor inta aan laga helin Play Store.
Qof kastaa waa lagu casuumi karaa wada sheekeysi kooxeed Hangouts leh xiriiriyeyaal gaar ah
Hangouts waxaa ku jira sheeko cusub oo aad ku martiqaadi karto isticmaale kasta adoo adeegsanaya xiriiriye u gaar ah koox sheekeysi gaar ah.
Daraasiin emojis cusub iyo kuwii hore ah ayaa hadda leh sinnaanta jinsiga
Muhiimadda ay leedahay barnaamijyada farriinta khadka tooska ah, Unicode ayaa noo suurta gelineysa inaan marinno noocyo kala duwan oo emoticons ah markasta.
8 Khiyaanooyin loogu talagalay Google Chrome oo ay tahay inaadan dhaafin, waxay ansax u tahay ku dhowaad dhammaan daalacashada internetka ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyowga 8da khiyaano ee loogu talagalay Google Chrome ee ay tahay inaadan seegin, oo ku habboon dhammaan daalacashada internetka ee loogu talagalay Android.
Ku dhawaaqay Moto E3 cusub oo leh afar geesle, 5 ″ shaashad iyo Android 6.0 Marshmallow
Moto E3-ka cusub ayaa la shaaciyey wuxuuna diyaar u noqon doonaa inuu suuqa ku dhufto bisha Sebtember qiimo ku dhow 132 $.
Adobe Lightroom waa la cusbooneysiiyay ilaa 2.1 oo leh kamarad isku dhafan oo la hagaajiyay
Adobe Lightroom ayaa lagu cusbooneysiiyay dhowr horumar oo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin barnaamijka kaamirada oo la hagaajiyay iyo waxyaabo kale oo badan.
[APK] Nooca 5.1 ee Kiiboodhka Google oo lagu daray Android N oo hadda laga heli karo Play Store
Nooca 5.1 ee Keyboard Google ayaa lagu soo daray nooca loogu talagalay soosaarayaasha Android N ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store.
Buug-yaraha Zoho waa barnaamij xusuus-qor ah oo doonaya inuu beddelo Evernote
Buug-yaraha Zoho ayaa yimid si uu isugu dayo inuu u beddelo Evernote, in kasta oo ugu dambayntii uu ku soo dhowaanayo astaamaha Google Keep
Android Marshmallow wuxuu ku dhuftey 13,3% bishii Luulyo tirooyinka cusub ee qaybinta
Android Marshmallow wuxuu ka qaadanayaa boos intaa ka sii badan garaafka ay Google daabacdo bil kasta kaas oo kala-goynta OS si wanaagsan loo arki karo.
[APK] Ugu dambeyntii Hangouts waxay ku dareysaa taageerada farriimaha fiidiyowga nooca cusub
Hangouts waxaa lagu cusbooneysiiyay nooca 11 oo leh farriimo fiidiyoow ah oo ku saabsan Android ka dib markii ay muddo ku qaadatay iOS.
[APK] Soo dejiso oo rakib HTC 10 Launcher cusub, oo shaqeynaya Android 4.4 iyo wixii ka sareeya
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Launcher-ka cusub ee HTC 10 wax kasta oo Android 4.4 Kit Kat ah ama noocyo ka sarreeya ee Android ah.
3-da GPS ee ugu fiican ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android
Kani waa liistadayda shakhsi ahaaneed ee 3-da GPS ee ugu fiican ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa ugu fiican qaabkiisa iyo shaqooyin aad u fiican.
Microsoft Sprightly wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto waraaqo iyo xayeysiin leh naqshad wanaagsan
Microsoft Sprightly waa barnaamij muhiim u ah wariyeyaasha ama ganacsiyada guryahooda ka imaan kara ee abuuri kara alaab farshaxanno ah oo ay hadhow gadaal ka iibin doonaan
Wonder.fm wuxuu ku siinayaa fursad aad ku xulan karto muusig cusub
Wonder.fm waa barnaamij iyo adeeg internet oo mas'uul ka ah inuu kuu keeno xulashada ugu wanaagsan ee muusigga madaxa-bannaan oo isbeddel ku imaan doona waqti aan fogayn
Facebook wuxuu bilaabay tijaabinta wada sheekeysiga qarsoodiga ah ee is baabi'inaya
Isticmaaluhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu saacad ku daro fariin laga soo diray Facebook Messenger oo iskeed wax u burburin doonta markay gaadho xadka.
Bitly ugu dambeyntii waxay bilaabeysaa barnaamijkeeda rasmiga ah ee Android
Ugu dambeyntiina, sanado kadib, Bitly waxay sii deysay barnaamijka rasmiga ah ee URL-ga gaabiye ee Android. Waxay u qalantay sugitaanka barnaamijkan wanaagsan.
Cyanogen OS C-Apps hadda waa loo heli karaa qof kasta oo qaba CM
Cyanogen Inc. waxay samaysay xirmo C-Apps ah oo la heli karo si isticmaale kasta oo wata nooca 'CM13' uu u iftiimiyo shantiisa barnaamij.
ASAP Launcher waa barnaamij bilow ah oo diiradda saaraya kaararka
Haddii aad raadineyso barnaamij bilow ah oo diiradda saaraya kaararka, Bixinta ASAP waxay noqon kartaa barnaamijkii aad raadineysay inuu beddelo midka aad hadda haysato.
[APK] Khariidadaha Google waxay isu diyaarineysaa khariidadaha qadla'aanta «Wi-Fi kaliya» iyo laba astaamood oo cusub oo xiiso leh
Beta-ka cusub ee Khariidadaha Google waxaa ku jira taxane ah astaamo cusub, oo ay ku jiraan awoodda isticmaalka Wi-Fi si aad khariidadaha ugu soo dejiso khadka
Soo dejiso oo rakib kamaradda qaabka iPhone 6 ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan rabaa inaan kuusoo bandhigo codsi kamarad iPhone 6-qaab ah oo ka socda Apple, kamarad aan awoodi doonno inaan kala soo baxno oo ku rakibno Android bilaash ah.